Ukuthandana ebuhlotsheni | Amakhasi ombala wamahhala wokulanda
Ngokuhamba kwesikhathi, ukuthandana kungadlulela
Bobabili abalingani basesidingo sokuthandana
Izenzo ezincane nezipho zingenza okuningi
Ingabe lo mdlalo ungabuya futhi?
Isidlo sokuthanda ndawonye ndawonye
Ungavumeli u-romance alale futhi
Ikakhulukazi uma ubudlelwane buhlala iminyaka eminingana, ngezinye izikhathi kungase kwenzeke ukuthi uthando lombambiswano luyanciphisa kancane. Lokhu kuvamile, kodwa imibhangqwana ingenza okuthile ngakho, ngoba kubalulekile ukuthi uthando lugcinwe ebuhlotsheni. Ukuze le phrojekthi iphumelele, kubaluleke kakhulu ukuthi bobabili abalingani bakhombise ukuzibophezela kanye nentando yokuletha ubuyekeze phambili embusweni.
Ukuvuselela uthando lomshado
Phela, ubudlelwane buhlale buhilela abantu ababili. Manje-ke, umbuzo uvela ngokuthi indlela romance ingaba yingxenye yokuphila kwansuku zonke futhi. Kunezindlela eziningana lapho ukuphila okuthandana ndawonye ebuhlotsheni kungafinyelelwa khona.
Umbhangqwana osemusha unesidlo sothando
Ngokuvamile, akuningi okudingekayo ukuhlanganisa uthando phakathi kokubambisana, ngoba ngisho nezenzo ezincane zisiza lokhu.
Uthando oluthile kufanele luhlale lukhona, ngoba umbhangqwana ungazuza esimweni sothando. Ngenxa yalesi sizathu, kunengqondo ukuqinisekisa ukuthi uthando lubuyela ebuhlotsheni futhi lulethe abalingani abasondele ndawonye. Ukudla ndawonye noma ukunikeza isipho esincane kumlingani kusiza ukugcina lo mdlalo uphila.
Ngisho umsebenzi wokuzilibazisa ohlanganyelwe ungaqiniseka ukuthi ukusondelana nomlingani kubonakala sengathi kuhle. Ngezinye izikhathi kungase kube nzima ukwenza izenzo zothando ngesikhathi eside, kepha umzamo uvame ukubaluleka, njengoba ubuhlobo obugcwele ubudlelwano bunganikeza ukuphila okujabulisayo kubo bobabili abalingani. Kodwa kungani isimo sothando sinciphisa kwezinye izimo?
Ngaphandle uma kuthathwa izinyathelo ezifanele, kungenzeka ukuthi uthando lomshado ebuhlotsheni luyaqhubeka ngokuhamba kwesikhathi. Ekuqaleni kobuhlobo obuningi, isithakazelo kumlingani sikhulu kakhulu, futhi ngokufanele, kwenziwa imizamo eminingi yokwanelisa umlingani futhi umjabulise.
Kodwa ngesikhathi esithile ebuhlotsheni kufika isikhathi lapho ukuphila kwansuku zonke kuqala khona. Uthando lomlingani ngezinye izikhathi luthathwa kalula, futhi imizamo eyayiyiyona iphuzu elibalulekile ebuhlotsheni ekugcineni liba kancane kancane. Ngaphandle kokuthandana komzimba, kungokwemvelo ukuthi impilo yansuku zonke iyanqoba futhi uthando lomshado lufinyeleleka.
Ngisho nasekusebenzisaneni okusheshayo okwamanje, kungenzeka ukuthi lothando luyehla ngokushesha.
Yiqiniso, kuqondakala kahle ukuvimbela lokhu. Kunezindlela eziningana zokuvimbela ubuhlobo ekulahlekelweni uthando. I-romance kufanele ihlale isihloko samanje ebuhlotsheni. Noma kunjalo, akuyona nje kuphela oyedwa ozakwethu onganikeza ukuthandana kothando. Kunalokho, kufanele kube nesithakazelo kubo bobabili abalingani ukuba banakekele uthando.
Ukuthandana kokubambisana akuveli nje. Bobabili abalingani basobudlelwano uma kuziwa ekugcineni imizwa yothando. Uma bobabili abalingani bezama ukwenza omunye umlingani ajabule, kulula kakhulu ukudala impilo yothando yansuku zonke enganikeza ukwaneliseka ebuhlotsheni.
Ngokusebenzisa bobabili abalingani, lo mdlalo ungenziwa ngokuhlukahluka kakhulu, ngoba-ke, umuntu ngamunye unomqondo ohlukile wokuthandana. Wonke umuntu uzizwa ezinye izinto kunokuthandana futhi yingakho imibhangqwana kufanele icabange ngalokho umlingani angathanda kakhulu. Ebudlelwaneni obuye beqhubeka isikhathi esithile, lo mlingani uvame ukuzana kahle futhi azi ukuthi yiziphi izinto azithandayo.
Lokhu kwenza kube lula ukulungisa okuthile okuthinta umlingani futhi kwandisa amathuba ukuthi umzamo uzothathwa njengesenzo sokuthandana. Uma bobabili abalingani benza umsebenzi wobudlelwane futhi benza konke okusemandleni ukugcina noma ukuvuselela uthando, amathuba okufeza lowo mgomo mkhulu kunokuba uma umlingani oyedwa elandela lo mgomo. Kakade ngezenzo ezincane isiqalo esithembisayo singenziwa.
Ngisho nesenzo esincane singanikeza imizwa yothando phakathi kobudlelwane. Isibonelo, akusho ukuthatha umzamo omkhulu ukuthenga izimbali emva komsebenzi bese ubaletha kumlingani wakho. Abantu abaningi bayajabula lapho bethola izimbali njengesipho.
Ezinye izipho ezingalindelekile nazo zingajabulisa umlingani. Ngempela, ukunikeza izipho ebuhlotsheni akukwenzeka kuphela ezinsukwini ezifana noKhisimusi, Usuku lukaValentine noma usuku lokuzalwa. Isipho, esenziwe ngokungalindelekile, ngokuvamile sinikeza injabulo eyengeziwe, njengezipho, okulindeleke ukuba kube ngumlingani ngamaholide omphakathi yebo futhi cishe njengendaba.
Ngakho-ke, izipho ezinjalo zingenza umlingani ajabule. Akukhathaleki ukuthi kunkulu kangakanani noma kuyabiza okwamanje. Kubalwa isenzo, ngoba senza kucace ukuthi kusekhona imizwa eqinile kumlingani wakho. Noma kunjalo, izipho ezimangazayo zalolu hlobo akufanele zenziwe nsuku zonke, kungenjalo zizobe ziba yindaba ngempela. Izipho ezincane kufanele zigcine imininingwane yazo ukuze ziqhubeke nokufaka isandla ekugcineni ubudlelwane bomshado.
Ngisho namazwi othandanayo, okushiwo noma okufingqiwe encwadini yothando, kuyindlela enhle yokubonisa umlingani, imizwa evezwayo. Izenzo ezincane nezipho zingasiza ukugcina uthando lomshado luphila noma luvuselele. Kodwa kungani uthando lubaluleke kakhulu kubambiswano?
Ukuthandana ebuhlotsheni kubalulekile
Ngezenzo zothando noma ukuziphatha okuthandwayo kubonisa umuntu okhathalelayo ngomlingani wakhe. Ngokuvamile, abantu bayakhohlwa ukuqonda lokho asebenayo kakade. Ubuhlobo obuhle kufanele bugcinwe ngaso sonke isikhathi ukuze ubudlelwano bobudlelwane abulahleke.
Ubuhlobo bomshado bunganikeza abalingani bobabili kumnandi futhi isikhathi esihle
Ngakho-ke into enhle uma bobabili abalingani bezama ukugcina imizwa yothando phakathi kokubambisana. Ukuthandana akuyona into ebonakalayo. Lezi zihlanganisa ubuciko nobuhlakani, ngoba-ke, ukuthandana komshado kufanele kube okuhlukile, ukuze kuvimbele ukuba bangaboni kakhulu. Uma uthando, naphezu kwemizamo yabalingani, kodwa ngesikhathi esithile selinyamalale ebuhlotsheni, ngakho-ke kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi ubuya.
Ngisho noma isimo sengqondo sokuthandana sishabalalisa ngokubambisana, akusho ukuthi sesinyamalale ngokuphelele naphakade. Esikhundleni salokho, kukhona ithuba lokuqinisekisa ukuthi uthando lubuyela ebuhlotsheni futhi mhlawumbe lube namandla ngisho nangaphambili.
Izikhathi ezithandekayo ekhaya
Kwezinye izimo kungase kube nzima kakhulu ukuvuselela uthando, kodwa ezimweni eziningi kuwufanele umzamo, ngoba ukubambisana okugcwaliswe ngothando kuyinto enhle kubo bobabili abalingani. Kodwa ubani ngempela othandana naye? Abesifazane noma amadoda?
Ingabe abesifazane namadoda bayakuthanda ngokulinganayo?
Empeleni akunakwenzeka ukusho ukuthi ngabe abesifazane noma amadoda basuke benothando, ngoba wonke umuntu uyaqonda enye into nge-romance yegama. Bobabili abesifazane nabesilisa bangaba nomqondo wokuthandana. Ubuhlobo bungabasiza uma bobabili abalingani behlinzeka ngothando oluncane kubambiswano futhi ngaleyo ndlela bakhuthaze ukuhlalisana okujabulisayo. Ngakho abesifazane namadoda bangaba nomlingani olinganayo. Kodwa kungenzeka kanjani ukuthi umbhangqwana usebenzise ubusuku obuthandana futhi iyiphi indawo efanelekayo?
Ukuzibandakanya okuvamile, okungenziwa kothando, kuyidla yokudlela. Ngokudla esitolo sokudlela, lo mbhangqwana akudingeki ulungiselele isidlo sakusihlwa, futhi kunalokho angagxila ekubeni nezingxoxo.
Isidlo esitolo sokudlela esihle sibhekwa njengelungiselelo lothando ngesikhathi sokuzilibazisa. Ngobusuku obuhle, lo mbhangqwana unethuba lokukhulumisana futhi ukuqinisa imizwa yabo yothando. Akugcini nje ukuba nidle ndawonye endaweni yokudlela kungathuthukisa ubuhlobo bomshado ebuhlotsheni. Izimangalo nazo zifanelekile ukufeza lo mgomo.
Yini umuntu okufanele acabange ngaphansi kokumangala kwakhe?
Ukumangala kokuthandana kungabonakala kuhluke kakhulu. Isibonelo, kungenzeka ukuthi uhlele ubusuku obuthandana futhi ubeke esenzweni ukuze unike umlingani wakho injabulo ngalendlela. Ngisho nobusuku ekhaya lakho kungasetshenziselwa ukwakha imizwa yothando.
Jabulela ukuthandana ekhaya lakho
Umculo omncane, i-sofa ekhululekile, i-movie yothando kanye nekhandlela elithandanayo. Ngisho ngosizo lwalezi zinto ezincane, kunethuba lokuchitha ubusuku obuthandana, okungawuthandana nabo ngokugcwele. Akudingeki nakanjani ukushiya ikhaya lakho ngokushesha nje lapho amalungiselelo okuhlwa ephelile.
Thola izikhathi zomlingani nomlingani wakho
Ngobusuku obumnandi e-sofa kungaba yothando kakhulu. Yiqiniso, kunezinye izindlela ezingasiza ukugcina uthando phakathi kokubambisana. Abashadile abathanda ukuchitha isikhathi sabo samahhala bangathatha ithuba futhi babheke ukuzilibazisa, okubambisana nabo bobabili abangakwenza ndawonye.
Ukubhekana nomlingani wakho
Yiqiniso, kuhle ukuba uhlale uhlanganisa ubudlelwano nempilo yansuku zonke ebuhlotsheni. Isibonelo, abalingani bangase bahlanganyele ukuze babonise ukuthi banesithakazelo ezintweni zokuzilibazisa zomlingani. Ngokwabelana ngokuthandwa, imibhangqwana inethuba lokuchitha isikhathi sabo samahhala ndawonye.
Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukuba ufune ukuzijabulisa okuvamile lapho bobabili abalingani benenjabulo yabo, ngoba emva kwakho konke, kukhona nemisebenzi yokuzilibazisa ethathwa njengokuthandana. Isibonelo, imibhangqwana ingathatha inkambo yokudansa futhi ithuthukise amakhono abo okudansa, bese uyibeka ngobuchule imidanso esanda kufundela phansi.
Ukuzilibazisa okwabelwana nakho kungasiza ekwandiseni uthando phakathi kobudlelwano. Ngale ndlela, kungenzeka futhi ukukhombisa umlingani ukuthi unesithakazelo esikhulu kuye. Uma selikwazi ukuletha ubuhlobo bomshado ebuhlotsheni, bobabili abalingani kufanele baqiniseke ukuthi bangalali futhi.
Noma yikuphi umbhangqwana owake wakuthola ukunciphisa ubuhlobo ebuhlotsheni bawo uyazi ukuthi ukuphinde ubuye ubuhlobo bomshado kungaba nzima kakhulu. Ngenxa yalesi sizathu, kunengqondo ukuqinisekisa ukuthi imizwa yothando ayisekho futhi. I-Romanticism isici esibaluleke kakhulu kuzo zonke izihlobo. Yingakho akufanele alahleke kunoma yimuphi ubambiswano.
Ngisho nezenzo ezincane zothando zingasiza ekwenzeni uthando ngobudlelwane. Ukusho ukuncoma okuhle noma amazwi aphefumulayo ngeke kube nzima futhi umlingani uzolijabulela ngempela. Ukuvakashela endaweni yokudlela yothando noma kusihlwa okujabulisayo ekhaya kuyizindlela ezinhle zokuchitha isikhathi nomlingani wakho futhi ube nezingxoxo, ngoba ngempela izingxoxo eziningi ebuhlotsheni zibalulekile. Sekuvele kwenzeke ngomzamo omncane wokuvimbela ukuthandana kokulala ngokubambisana.
Impelasonto yothando ... Ukuthandana kokubambisana
Ukubulala ubuhlobo | Ukusebenzisana nobuhlobo
I-cuckoo nembongolo - amanothi nombhalo
Umbhalo we-Fairytale Abafowethu Grimm - I-Puss eBhoots
Umbhalo we-fairytale uHans Christian Andersen - I-...
Ichibi elingaphandle nomndeni
Ukuhleleka ekhabethe lezingane | imfundo